Ifulethi eli-1 lokulala @ indlu enhle yangaphambili ye-lagoon!
422 okushiwo abanye
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Adriana & Luis
Ifulethi litholakala esitezi esikhulu sendawo enkulu enkabeni yeBacalar. Iyifulethi elinethezekile kakhulu, eli-1, elikhethekile kakhulu, eligcinwe kahle, futhi elihlomele ukuhlala isikhathi eside nesifushane. Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi isivakashi sethu sizizwa sisekhaya futhi sijabulela okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele nathi. (Abadala kanye +15).
Ifulethi linekhishi eliphelele elinesitofu, ifriji, izinto zokusika eziyisisekelo namapani, igumbi lokuhlala negumbi lokudlela, igumbi elikhulu elinombhede wenkosi onethezekile (igwebu lenkumbulo), umbhede osofa, umbhede wendlovukazi, nendawo yokugezela yangasese evulekile. Kukhona futhi i-TV yesikrini esiyisicaba esikwazi ukufinyelela i-Netflix, i-DVD enokukhetha okuhle kwamamuvi, kanye ne-wi-fi. Ungajabulela ithala elibheke engadini enhle, ama-palapas amahle angu-2, kanye nedokodo eliyimfihlo elimangalisayo.
4.98 ·422 okushiwo abanye
4.98 · 422 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-422
Indawo yethu inomhlaba omuhle kakhulu womibili, edolobheni elincane lapho amakhabethe engatholakali ngaso sonke isikhathi, njengoba amabhlogo angu-2 enkaba yempilo, kuyilungelo. Enkabeni yedolobha, ungathola i-ATM'S, isibhedlela, izikhungo zamasiko, izindawo zokudlela, izitolo, njll.
Ibungazwe ngu-Adriana & Luis
Singumbhangqwana osemusha ohlala esitezi sesibili sendlu enamafulethi angu-2. Sihlala sinaka isidingo sezivakashi zethu, kodwa sithanda ukunikeza nokwamukela ubumfihlo ngaphakathi kwesimo sokuzwana.
UAdriana & Luis Ungumbungazi ovelele